Nzira Yokuva Dhiyabhorosi Scientist Akapupurirwa Nyanzvi? - ITS Tech School
Nzira Yokuva Dhiyabhorosi Scientist Akapupurirwa Nyanzvi?
Nzira yekuve Deta Scientist?
Data Data Expert - Data Scientist
Data Scientist : Data Science inzvimbo yakasiyana-siyana iyo inoshandisa huwandu hunyanzvi hwokuisa-zviyero, mapurogiramu, kudzidzira kwemichina, date kuchera, uye kuongororwa - kuisa pfungwa pakudzidza uye kubatsira ruzivo ruzivo runogona kushandiswa kutora kusarudzwa kwebhizimisi. Nekufema kwedhase munzvimbo yose, dhizinesi re data yakagamuchira hukama hwekuve chimiro pakati pezvakawanda zvakanyanya uye zvakakosha mukudanidzira kwezvichauya. Kutendeukira kumutsoropodhi wenhau haisi basa risiri nyore sezvo richiita kuti nyanzvi dzive dzakanaka kune dzimwe nzvimbo dzenzira dzakadai kushandiswa kwemasvomhu, software engineering, kudzidza kwechokwadi, mashandisirwo emichina, kunyatsoongorora, database, maitiro ekutsvaga. Kuti zvive nehutano hwakasiyana-siyana hunyanzvi, zvinokosha kuti ugadzirire kugadzirisa kubva kune dzidziso dzehupfumi dzakakosha dzine hurongwa hunokosha uye dzidzo yekudzidza kudzidzisa nyaya idzi.
A 12-vhiki kana kuti mwedzi we3 mwedzi kubva kuInnovative Technology Solutions muDescience Science inogona kunge yakakosha kune vose vanoda kupinda muzvinhu zvose zveBad Data Analytics. Ichi chikwata chinowedzera chikwata chinosanganisira 12 zvakasiyana-siyana modules apo kusimbiswa kuchave pane imwe neimwe yezvakataurwa zvichiti:
Linux uye SQL
Python uye Scala Programming
Hadoop YARN uye Ambari
Sqoop, Flume naKafka
Nguruve, Hive uye Impala
R Programming kana Predictive Modeling
Chiitiko uye Maonero Anokurumidza
Kutanga Machine Kudzidza
Chimwe chezvinhu izvi zvinoratidzika Big Data Analytics iyo inogara isingagadziri munda iyo inoshanda semutauro unozivikanwa mazuva ano. Dzidzo iyi inotanga kutanga pasina rubatsiro rwokunze kuratidza mazano anokosha pamusoro pekufambira mberi kweDynam Data, zvichiri kuenderera kuchikoro chekudzidzira Data Science. The Hadoop biological system inowedzera zvakadhindwa mumashoko anotyisa kunowedzera mitezo neApache Hadoop danho reBig Data Analytics.
Iyi ndiyo yevannabes avo vari ikozvino mukutsvakurudza kwebhizimisi, asi vanoda kutungamirirwa nekusigirwa pane pfungwa, somuenzaniso, R Programming, Machine Learning, Predictive Modeling, uye Statistics. Nyanzvi dzine ruzivo dzinofanirwa kutarisa pamusoro pehutano hwavo kugadzirira kugutsikana dzinogona kubatana neyi 3-vhiki yevhiki. Kushuva Dhiyabhorosi Dhizinesi mune ino dzidzo ichatorawo masimba pane Dhiyabhorosi maitiro uye R kuongorora. Dzidzo ichafukidzira iyo inotevera ma modules:
Sayenzi uye Nhamba
R Zvirongwa uye Kufananidza Kufananidza
Data Science Certification Course muIndia | Nei Tichifanira Kuziva Sayenzi?
18 Inowanikwa Popular Data Sayenzi Hurukuro Mibvunzo Nemhinduro